डिभोर्स गर्दा अब कसरी हुन्छ अंशबण्डा ? - Tree Media News
डिभोर्स गर्दा अब कसरी हुन्छ अंशबण्डा ?
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंशबण्डा गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि लागु हुने संहिता ऐनको दफा ९९ मा अंशबण्डा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
दफा ९५ मा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा पतिको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था आएको मानिनेछ । पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिई घरबाट निकालेमा, शारिरिक वा मानसिक कस्ट दिएमा, पतिले अर्काे विवाह गरेमा, पतिले अर्काे महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा, पतिले जवरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पतिका कारण पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य भएको मानिने छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेको सम्पत्ती अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ । तर अंशबण्डा गर्न लामो समय लाग्ने देखिएको अवस्थामा भने अदालतले अंशबण्डा नभएसम्मका लागि पतिले पत्नीलाई मासिक खर्च दिने व्यवस्था मिलाई दिन सक्नेछ । तर अंशबण्डा हुनु अगावै ति महिलाले अन्त विवाह गरि गएमा अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ९९ को खण्ड ६ मा पत्नीलाई अंश दिन नपर्ने कारणहरुबारे उल्लेख छ । पत्नीले खान बस्न नदिई पतिलाई घरबाट निकाली दिएमा, पत्नीले पतिलाई शारिरिक तथा मानसिक कस्ट दिई जालझेल गरेमा र पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौनसम्पर्क राखेको ठहरेमा भने सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिले अंश दिनु पर्दैन ।
नयाँ कानुनमा पतिको अंश लिन नचाहने पत्नीका लागि नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । जस अनुसार पत्नीले एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम खर्च लिन सक्ने छन् । यो व्यवस्था अनुसार पत्नीले मान गरेमा पतिको सम्पत्ती वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम दिलाई दिन सकिने व्यवस्था छ । तर पत्नीले अर्काे विवाह गरेमा भने त्यस्तो रकम वा खर्च दिनुपर्ने छैन ।
पतिको कुनै सम्पत्ती नै नभएको र पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएको अवस्थामा गरिने कारवाहीका लागि दफा १०१ मा उल्लेख छ । जस अनुसार पतिको कुनै सम्पत्ती छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पतिको आम्दानीका आधारमा खर्च भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पत्नीले अर्काे विवाह गरेमा अथवा पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिन नपर्ने व्यवस्था छ ।
संहिताको दफा १०२ मा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्ध विच्छेदको कानुनमा जे जस्तो सुकै कुरा उल्लेख भएता पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पति पत्नीबीच कुनै लिखित सहमति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछन् । तर यस्तो सहमति नाबालकको हित विपरित हुने सहमति गर्न सकिने छैन ।
सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाको मृत्य भएपछि उनको नाममा भएको सम्पत्ती पूर्व पतिले नै पाउने समेत व्यवस्था छ । तर यसका लागि महिलाको कुनै बालबच्चा नभएको हुनु पर्नेछ ।
Previous PostAgarbatti smoke is MORE harmful than cigarette smoke and may cause cancer!Previous Post
Next Postलागु भयो श्रमिकको नयाँ पारिश्रमकि दर कसको कति ?Next Post